Muuri News Network » Xuseen Carab Ciise oo ku tilmaamay magaalada Marka in ay tahay magaalo la dayacay
Xuseen Carab Ciise oo ku tilmaamay magaalada Marka in ay tahay magaalo la dayacay
Guddoomiyaha guddiga difaaca Baarlamaanka Xuseen Carab Ciise iyo qaar ka mid ah xubnaha guddiga ayaa maanta booqasho qaadatay maalin ku tegey magaalada Marka ee gobolka Sh/hoose.
Booqashada kadib ayuu xildhibaan Xuseen Carab Ciise waxa uu sheegay in dhibaato xoog leh ay ka jirto magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose xaalada shacabka ku nool degmada Marka ay tahay mid aad u liidato.
“Dhowr sano kadib wax horumar ah kama muuqato magaalada ganacsiga magaaladana wuu xirnaa mana jiro wax maamul ah oo ka jira magaalada dadkuna waxa ay inoo sheegeen inay u baahan yihiin maamul.”ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Guddoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen saraakiisha AMISOM ee ku sugan magaalada ay u sheegeen in guddi madaxbanaan dhowaan ay iman doonaan isla markaana baari doonaan dil loo geystey qoys Soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Marka arrintaana ay u xiran yihiin saddex askari oo ka tirsan AMISOM.
“Madaxweynaha Maamul goboleedka Koofurgalbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa u magacaabay maamul cusub magaalada Marka; oo Madax ka yahay Mudane Xasan Cumar Maclin iyo taliyaal ciidan.”ayuu yiri Xuseen Carab CIise oo ka hadlayay arrimaha maamulka magaalada Marka.
“Magaalada ma joogaan ciidamo dowli ah waxaana shacabka ay dhexda u galeen maleeshiyaad iyo ciidamada AMISOM waxaa loo baahan yahay in si degdeg ah ciidamo loo geeyo magaalada Marka.”ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Wafdiga dhinacyo kala duwan leh oo booqday magaalada Marka ayaa waxa ay intii ay booqashada ku joogeen ay goobjoog ka ahaayeen bam lagu soo tuuray ciidamada AMISOM kaasoo uu ku dhaawacmay mid ka mid ah ciidamada AMISOM.
Magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose ayaa maamulkeeda waxaa isku haysta maleeshiyo beeleed mid walba doonayo in uu magaalada ka taliyo,waxayna taasi sababta boqolaal qoys in ay ka barakacaan magaalada isla markaana uu burburo adeegyadii bulshada.
Magaalada Marka ayaa waxa ay can ku ahayd ammaanka iyo ganacsiga waxana ay ka mid ahayd magaalooyinka Soomaaliyeed ee taariikhda fog leh isla markaana leh ilbaxnimo ama xadaarad fac weyn.